Izindaba - Iqembu lase-Italy i-Eni Group lithole amaphrojekthi wamandla kagesi we-1.2GW eSpain kanye ne-photovoltaic
I-Eni Group yase-Italy ithole amandla omoya waseSpain namaphrojekthi we-photovoltaic eSpain
Inkampani yamandla e-Italy u-Eni ifinyelele esivumelwaneni no-Azora, inkampani ezimele yokuphathwa kwezezakhiwo, ukuthenga iphothifoliyo yamandla avuselelekayo engu-1.2 GW eSpain.
Iphothifoliyo yotshalo-mali ka-Azora ifaka phakathi amapulazi omoya amathathu asebenzayo, ipulazi elilodwa lomoya elakhiwayo (elinamandla aphelele angama-230 MW phakathi kwazo) nezikhulu ezinhlanu ezinkulu ilanga amaphrojekthi kagesi ezigabeni zakamuva zentuthuko, ngezinga eliphelele le-1GW. Izimpahla zitholakala e-Andalusia, Castile-La Mancha, Castile naseLeon, Catalonia, Galicia naseLa Rioja.
U-Azora no-Eni bathi bazosebenza ngokubambisana ukuqinisekisa ukuthi lawa maphrojekthi amahlanu elanga ayakhiqizwa ngonyaka ka-2024, futhi bangeze nokuthi basebenza esivumelwaneni esinamasu esibanzi sokuqhubeka nokwandisa inkundla yamandla avuselelekayo eSpain. Imakethe yangena emakethe yaseSpain ngoFebhuwari ukuthenga iphrojekthi ye-photovoltaic eyi-140 MW kwa-X-Elio.
USantiago Olivares, ongumlingani ophethe ukutshalwa kwezimali kwengqalasizinda e-Azora, uphawule wathi: "Sizosebenzisa umlando wethu weminyaka engaphezu kwengu-20 kulo mkhakha ukuxhasa uhlelo lokukhula lokuvelela luka-Eni."
Ohlelweni lwayo, u-Eni unethemba lokuthi uzokwakha iphothifoliyo ebalulekile yokuvuselela amandla e-Italy. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, umemezele ukusebenzisana ngokuhlanganyela neCassa Depositi e Prestiti Equity. Ngo-2025, inkampani izotshala imali engaba yizigidi ezingama-800 zama-euro emkhakheni wezamandla avuselelekayo wezwe. Lezi zinkampani ezimbili zihlela ukwakha i-1 GW yamaphrojekthi wamandla elanga nomoya esebenzisa impahla kahulumeni wase-Italy.
I-Hangchi Technology yinkampani ephelele ye ibhethri lelanga ,uhlelo lomkhathi ,iphaneli yelanga . Sine uchungechunge lwesipiliyoni kumakhasimende aphakathi nendawo namancane kusuka ku-1KW-100KW system yelanga.
Ngiyethemba ukuthi singathola uphenyo lwakho kungekudala.
Isikhathi Iposi: Jul-29-2021